I-APE: Umbhali, uMshicileli, usomashishini Martech Zone
Ukulungiselela udliwanondlebe lwethu noGuy Kawasaki, ndathenga ikopi I-APE: Umbhali, uMshicileli, uSomashishini-Indlela yokuPapasha iNcwadi.
Ndizifundile uninzi lweencwadi zikaGuy Kawasaki kwaye bendi ngumlandeli kangangexesha elithile (qiniseka ukuthobela udliwanondlebe okokuqala wandithumela umyalezo ... ibali elihlekisayo!). Le ncwadi yahluke mpela, nangona… yincwadi eneenkcukacha yenyathelo nenyathelo malunga nendlela yokuzipapasha kwi-ebook yakho.
Ababhali uGuy Kawasaki kunye noShawn Welch baqala I-APE: Umbhali, uMshicileli, usomashishini ngebali eliyinyani ekukhathazekeni kukaGuy kukufumana ukupapashwa kwakhe kokugqibela ngombane ngokuthenga ngobuninzi kwinkampani. Incwadi emva koko ihamba ngayo yonke imiceli mngeni yeencwadi zeencwadi-ukusuka kwifomathi, kwizixhobo, ukuya kusasazo kwintengiso. Kunzima kakhulu kunokuba ucinga (de kube yile ncwadi!).
Iinkcukacha zencwadi zonke iindlela eziqinisekisiweyo zokwenza i-ebook yakho, ezantsi ezantsi kwiscreen lwezixhobo oza kuzisebenzisa, iisayithi oza kuzisebenzisa, kunye neendawo zentengiso. Ndamangaliswa ngokwenene kuzo zonke iinkcukacha. Sisikhokelo samanyathelo ngamanyathelo esisikhokelo kuye nawuphina umntu ukuba azipapashe.
Ndichukumisekile kangangokuba ndiye ndathenga ndaza ndahambisa ezinye iikopi ezi-3… ukuya UJenn kwaye Marty Bobabini basebenzela iincwadi zabo yonke indlela eya kuNathan, umyili wethu, oya kuthi ancede kuyilo lwegraphic.
Kutheni upapasha incwadi?
Saqala ukuchukumiseka ngamathuba okuzipapasha xa sasidlan 'indlebe noJim Kukral. UJim wasibonisa into yokuba igophe leemfuno zeencwadi zazinyuka ngokukhawuleza kakhulu kunoko ziphumayo iincwadi zeencwadi. Eli lixesha elimangalisayo lokuba abantu okanye iinkampani zenze ukuthembeka kunye negunya ngokupapasha i-ebook.
Ukuba unento ephawulekayo oyithethayo… eli lithuba lakho lokupapasha kwaye wabelane ngalo!
tags: nyaniumbhalie-ncwadiebookUmakhiGuy KawasakiukushicilelaUmvakalisiukuzipapasha
Ulwazi olukhulu lweDatha oluvela kuMicrosoft
Ngaba uyangena kwi-ghostwriting encwadini? Ngaba unalo isicwangciso kubantu abangenalo ixesha (okanye mhlawumbi italente) yokubhala?
Molo @daveyoung:disqus, kukho iingcebiso zokubhala kwincwadi. Ndicinga ukuba uGuy mhlawumbi ngowokuqala ukukuxelela ukuba umbhali-mbhali linyathelo elikhulu ukuba awunalo ixesha okanye italente. Ndandinombhali endisebenzisana naye kwincwadi yam kwaye uye wenza yonke into yalula… eyona ncwadi yayiziingcinga zam kodwa uChantelle wazicwangcisa kwaye wayigcina iprojekthi ekujoliswe kuyo.